तालिवान सरकारले महिलामाथि लगायो यस्तो प्रतिबन्ध, विश्वभरबाट बिरोध, अब के हुन्छ ? — Sanchar Kendra
तालिवान सरकारले महिलामाथि लगायो यस्तो प्रतिबन्ध, विश्वभरबाट बिरोध, अब के हुन्छ ?
एजेन्सी । अफगानिस्तानका क्याम्पसमा महिलालाई अध्ययन अध्यापनका लागि प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले क्याम्पसहरू सुनसान भएका छन् । तालिवान सरकारले क्याम्पसहरूमा महिलालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि महिलाहरू क्याम्पस नगएकाले क्याम्पस सुनसान भएका हुन् ।
पहिला पहिला भिडभाड तथा चहल पहल हुने क्याम्पसहरूमा अहिले शान्त र सुनसान भएको शिक्षकहरूले जानकारी दिएका छन् । अमेरिकाबाट प्रकाशित हुँदै आएको वासिङ्टनपोष्टले प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार क्याम्पसहरूमा पुरुषहरु मात्रै देखिएका छन् ।
तालिवान सरकारले महिलाहरूलाई शैक्षिक संस्थाहरुमा गएर अध्ययन अध्यापन गर्न, सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन, एक्लै घर बाहिर निस्कन प्रतिवन्ध लगाएको छ । सरकारको यो निर्णयको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ भने छात्रा तथा शिक्षिकाहरूले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
विद्यालय गएका छात्राहरूलाई पनि इस्लामिक पोशाक लगाएर जानु पर्ने र कक्षामा छात्रहरूसँग राख्न नहुने मापदण्ड तय गरिएको छ । तालिवान प्रवक्ता बिलाल कारिमीले भने महिलाहरूकै हितका लागि यस्ता व्यवस्था गरिएको दावी गरेका छन् । तर याे कदमकाे विश्वभरबाट बिराेध सुरू हुन थालेकाे छ ।
अफगानिस्तानमा तालिवान विद्रोहीहरुले अघिल्लो महिना सत्ता कब्जा गरेपछि आफ्नो सरकार बनाउदै नयाँ व्यवस्थाहरु लागू गरेका छन् । अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको फिर्तापछि, तालिवानको बढ्दो शक्ति, देशको कब्जा र अराजकताको माहौल धेरै विशेषज्ञहरुद्वारा अमेरिकाको हारको रूपमा वर्णन गरिएको छ। तर केहि मानिसहरुको लागि यो एक हराएको लडाई हुन सक्छ, तर धेरैको लागि यो एक लाभदायक सम्झौता भएको छ।
सन् २००१ र २०२१ को बीचमा, २.३ बिलियन डलर यस युद्धमा खर्च गरिएको थियो, १.०५ बिलियन डलर अफगानिस्तानमा रक्षा मन्त्रालयको संचालन पूरा गर्न खर्च भएको थियो। यो रकमको एक ठूलो हिस्सा अफगानिस्तानमा अमेरिकी परिचालनलाई समर्थन गर्ने निजी कम्पनीहरुको सेवाहरुमा खर्च भएको थियो।
क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको केनेडी स्कूल अफ गभर्नन्सकी प्रोफेसर लिन्डा बिम्स भन्छिन्, ‘यो लडाईमा अमेरिकी सैनिकहरुको संख्या धेरै ठूलो थिएन। सबै स्वयंसेवकहरु सैन्य ठेकेदारहरुद्वारा प्रदान गरिएको थियो। अमेरिकी सैनिकहरु भन्दा धेरै अनुबंधहरु थिए। तर संख्या काम गर्ने मानिसहरुको संख्या दोब्बर थियो। ‘
लिन्डा बिल्म्सले बीबीसी मुन्डोलाई भनिन्, ‘अफगानिस्तानमा पठाइने सेनाको संख्या राजनीतिक रुपमा सीमित थियो र ठेकेदारहरुको संख्या पनि यसै आधारमा तय गरिएको थियो।’ उनी अगाडि भन्छिन्, ‘त्यहाँ ठेकेदारहरु थिए जसले विभिन्न प्रकारका कामहरु गरेका थिए, जस्तै हवाईजहाजमा इन्धन भर्ने, ट्रक चलाउने, खाना पकाउने, सफाई गर्ने, हेलिकप्टर चलाउने, र सबै प्रकारका उपकरण र सामग्री ढुवानी गर्ने।’ पाँच कम्पनीले सबैभन्दा बढी फाइदा उठाएको जनाइएको छ ।
अमेरिका र अन्य देशहरुबाट १०० भन्दा बढी कम्पनीहरुले अफगानिस्तानमा सेवाहरुको सबै प्रकारको लागि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट अनुबंध प्राप्त गरेका थिए। यी मध्ये केही कम्पनीहरुले अरबौं डलर कमाएका छन्। २० वर्ष अफ़ वरु प्रोजेक्टकी निर्देशक प्रोफ़ेसर हेदी पेल्टियर ‘कस्ट फ़ वर’ प्रोजेक्टको एक हिस्सा हुन्। उनले बीबीसी मुन्डोलाई भनिन्, ‘कुन कम्पनीहरुले सबैभन्दा धेरै लाभान्वित भएका छन् भनेर देखाउने कुनै आधिकारिक डाटा छैन।
जे होस्, उनले बीबीसी मुन्डोजसँग परियोजनाको अनुमान साझा गरे जुन अझै प्रकाशित हुन बाँकी छ।’ यी अनुमानहरु अमेरिकी सरकारको वेबसाइट गकबकउभलम।नयख मा उपलब्ध डाटाको समीक्षाको आधारमा तयार गरीएको हो। यो डाटा अमेरिकी सरकारको खर्चमा आधिकारिक जानकारी दिन्छ, जो २००८को वित्तीय संकटपछि तयार गरिएको हो ।